AOI - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
PCB Flexible sy hentitra
PCB matetika matetika
Avo TG PCB
PCB matevina matevina
Sourcing amin'ny singa
Mpanohitra hafa maro
Assemblement PCB (PCBA)
Fanontam-pirinty vita amin'ny solta
Solosaina mikoriana indray
DIP (amin'ny alàlan'ny fanangonana lavaka)
Fandefasana programa mikirindro
Vita vita (PCBA + boaty fananganana)
PCBA + boaty plasitika
PCBA + Wire Harness
Boaty PCBA + METAL
Birao tsy misy tariby
Famolavolana elektronika (layout Skema & PCB)
Prototyping sy mari-pahaizana momba ny vokatra
Volavola ho an'ny famokarana
NDA & Fiarovana amin'ny zon'ny mpamorona
VMI (Vendor Manage inventory)
Fahatanterahana Logistic Manerantany
Varotra fisoratana anarana sy fisoratana anarana amin'ny patanty any Shina
Lahatsary momba ny Fumax
AOI dia dingana QC tena manandanja amin'ny fanamarinana ny kalitaon'ny soldering SMT.
Fumax dia mifehy henjana amin'ny AOI. Ny tabilao 100% REHETRA dia voamarin'ny milina AOI amin'ny tsipika Fumax SMT.
AOI, miaraka amin'ny anarana feno Automated Optical Inspection, dia fitaovana ampiasainay hamantatra ireo takelaka boribory omenay mpanjifa manana kalitao avo lenta.
Amin'ny maha teknolojia fanandramana vaovao misimisy azy, dia hitan'ny AOI ny lesoka mahazatra hita amin'ny soldering sy ny mounting mifototra amin'ny haitao fikirakirana haingam-pandeha haingam-pandeha sy avo lenta. Ny fiasan'ny masinina dia ny scan ny PCB mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny fakantsary, manangona sary ary mampitaha ireo masontsivana ao anaty tahiry. Aorian'ny fanodinana sary dia hanamarika ireo kilema voamarina izy ary aseho amin'ny monitor amin'ny fanamboarana tanana.
Inona no ho hita?
1. Rahoviana no mampiasa AOI?
Ny fampiasana aloha ny AOI dia mety hisoroka ny fandefasana tabilao ratsy amin'ny dingana fivoriambe manaraka, hahatratrarana fanaraha-maso tsara. Izay mampihena ny vidin'ny fanamboarana ary misoroka ny takelaka boribory tsy azo amboarina.
Ny laharana AOI no dingana farany, azontsika atao ny mahita ny lesoka rehetra amin'ny fivoriambe toy ny fanontana pirinty solder, ny fametrahana ny singa ary ny fizotran'ny refow, manome fiarovana avo lenta.
2. Inona no ho hita?
Misy refy telo lehibe indrindra:
Ny mpanara-maso dia hilaza amin'ny mpiasa mpikojakoja raha marina ny solaitrabe ary asio marika ny toerana tokony hamboarina.
3. Maninona isika no mifidy AOI?
Raha ampitahaina amin'ny fanaraha-maso an-tsary dia manatsara ny fahitana hadisoana ny AOI, indrindra ho an'ireo PCB sarotra kokoa sy ireo boky famokarana lehibe kokoa.
（1） Toerana marim-pototra: Toy ny 01005.
（2） Vidiny ambany: Mba hanatsarana ny taham-pahafahan'ny PCB.
（3） Zavatra fanaraha-maso marobe: Anisan'izany fa tsy voafetra amin'ny fizaran-tany fohy, faritra tapaka, solder tsy ampy sns.
（4 lighting Jiro azo alamina: Mampitombo ny fihenan'ny sary.
Software 5 software Rindrambaiko mahomby amin'ny tambajotra: Fanangonana sy fanangonana data amin'ny alàlan'ny lahatsoratra, sary, tahiry na fampifangaroana endrika maro.
（6 feedback Fanehoan-kevitra mahomby: Ho fanondroana ny fanovana ny masontsivana alohan'ny famokarana na fivoriambe manaraka.
4. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny TIC sy AOI?
（1） Ny TIC dia miankina amin'ny toetoetran'ny herinaratra amin'ireo singa elektronika ao amin'ilay faritra mba hijerena. Ny toetra ara-batana amin'ireo singa elektronika sy ny fantsom-pifandraisana dia voamariky ny fahita ankehitriny, ny herinaratra ary ny onjam-peo.
（2） AOI dia fitaovana iray izay mamantatra ireo kilema mahazatra hita amin'ny famokarana solder mifototra amin'ny fotokevitra optika. Ny sary aseho amin'ireo singa misy ny fizaran-tany dia voamarina tsara. Fitsarana fohy no tsaraina.
5. Fahafahana: Sets 3
Raha fintinina, AOI dia afaka manamarina ny kalitaon'ny tabilao mivoaka avy amin'ny faran'ny tsipika famokarana. Izy io dia mitana andraikitra mahomby sy marina amin'ny fizahana ireo singa elektronika sy PCB hahazoana antoka fa manana kalitao avo lenta ny vokatra nefa tsy misy fiatraikany amin'ny tsipika famokarana sy ny tsy fahombiazan'ny PCB.